बाढीले नेपालभर १ अर्व भन्दा बढीको नाेक्सान ! - Maxon Khabar
Home / News / बाढीले नेपालभर १ अर्व भन्दा बढीको नाेक्सान !
बाढीले नेपालभर १ अर्व भन्दा बढीको नाेक्सान !
काठमाडौं, श्रावण १८
नेपालमा मनसुन सुरू भएसंगै असार अन्तिम साता यता आएको अविरल वर्षा पछिको बाढी पहिरो र डुबानकाे कारण नेपालभरका विभिन्न स्थानमा करिब एक अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ । अहिलेसम्म ३६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरण अनुसार एक अर्ब छ करोड ४५ लाखको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारसंग डुबान र बाढी पहिरो ले विभिन्न ६७ जिल्ला प्रभावित भएकाे राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले बताएका छन । बर्षा विपद् मा परी झण्डै ९० हजार घर परिवार प्रभावित भएका हुन । मृतक परिवारलाई सरकारले प्रति मृतक १ लाख रुपैयाका दरले राहत दिने याेजना शुरु भएकाे छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानमा एक अर्ब बढीको क्षति भएको जानकारी दिँदै जिल्लामा विवरण सङ्कलन कार्य अझै पनि जारी रहेको वेदनिधि खनालले बताउनुभयो ।
राहत र उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी स्रोत साधन परिचालन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार बर्षा विपद्मा परेी हाल सम्म ११३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै ३८ जना बेपत्ता भएका र ६७ जना घाइते भएकाे गृह मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।